दैनिक दिसा लाग्दैन ? अब नआत्तिनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय ! - ज्ञानविज्ञान
पेटमा खराबीपना भएमा ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अल्सर लगायतका अन्य रोगले समाउँछ । सबैको चाहना सुन्दर बनौं भन्ने हुन्छ । सुन्दर रहनको लागी पनि पेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पेटमा फोहोर वा खराबीपना छ भने त्वचामा पनि र कपालमा समस्या सिर्जना जस्तै त्वचामा कालो दाग धब्बा, कपाल झरेर पातलो हुने, कपाल वा अनुहार रुखो देखिने आदि ।
बिहान खाली पेटमा अपनाउने उपाय
हामीले केही सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै
सुत्ने र उठ्ने समय नमिल्नाले पनि कब्जियत हुन्छ ।
डर, चिन्ता, खिन्नता, उदासिनता, अनिद्रा, यौनशक्तिको क्षय, प्रतिरक्षा प्रणालीको कार्यक्षमता गडबड हुनु, सर्दीले सताइ रहनु, ज्वरो, खोकी बल्भि्करहनु, मांसपेसी तथा नसा-नाडीहरु कमजोर हुनु, अन्तश्रावी ग्रन्थीहरुको कार्य सुुचारु नभएर हार्मोनको मात्रा घटवड भइरहनु लगायत समस्या पनि आउँछ।
Don't Miss it ताजा तरकारी भन्दा बासी तरकारीमा बिषादीको मात्रा कम
Up Next कुन ब्लड ग्रुप भएका मानिसको आनीबानी र स्वभाव कस्तो हुन्छ ? जानिराखाैँ